Fampitàna mivantana androany alina 19.00: Derbymatch Holms SK – Kovlands RAHA | Holmbygden.se
Fampitàna mivantana androany alina 19.00: Derbymatch Holms SK – Kovlands RAHA
Posted on 18 Mey, 2016 ny Holmbygden.se
Match ny andro Live! Ho azo antoka manana ny tsara indrindra ny fitaovana tsara eo ambany ankavanana. Raha toa ka misy ny olana ara-teknika, manandrana fa tsy nalefa mivantana rohy eto ambany.
anio alina 19:00 nilalao “Nordvästras El Clásico” amin'ny Holm Vallen amin'ny mahazatra Derby fihaonana eo Holm SK – Kovlands RAHA. Ny lalao tia tahaka ny mahazatra, ny tsara indrindra an-toerana miaraka amin'ny steaming kapoaka Java sy ny saosisy, na Burger avy ao amin'ny kiosk.
Holmbygden.se livesänder matchen. Ho an'ireo izay tsy dia tsy afaka nanatrika azy io amin'izao manetriketrika vårdrabbning, mandeha tsara ihany koa ny lalao ny mahita ity tranonkala. Taloha kelin'ny ny lalao Fangalarana mpanao gazety eo an-toerana ny fakan-tsary Fredrik Wikholm miaraka ny lalao fanehoan-kevitra nalefa tamin'ny manam-pahaizana manokana sy ny vaovao farany tao amin'ny toby HSK.
Lineup, lalao filazana sy ny vokatra, ny andinin-teny isaky ny lalao maimaim-poana eto!
Izao hariva izao ny Stream (“nandinika lalina” ambony): https://www.youtube.com/watch?v=CniAUdOSnXo
HSK:amin'ny Youtube-Channel: holmssk.se/youtube
Last Derby, ny fahatsiarovana svärd Holm Seger! Last HSK nandray Kovland amin'ny Holm Vallen dia telo taona lasa izay tany May 2013 in DM-Shocker, fa taorian ' 3-3 manontolo andro niakatra ho any amin'ny sazy shootout. 6-4 ny vokatra farany toy ny, taorian'ny fifandonana mahafinaritra teo anoloan'ny mitafo.
Jereo ny feno tsimoka sazy ambony ny fivoriana farany tao Holm Vallen eo Holm SK – Kovlands RAHA.